Posted by ဇနိ at 3:59 PM
khin oo may September 12, 2008 at 5:23 PM
မဇနိက သိတ်ရယ်ရတာဘဲ. ဖျားနေ လို့သာဘဲ. ချက် စားလိုက် တာ စုံလို.။ ဖျားများမ ဖျားရင် ဆိုင် ဖွင်.မလား အလှူ လုပ် မလား မသိ။ မင်္ဂလာသာ ဆောင်လိုက် ပါဗျာ။ အားလုံးကို ခေါ် ကျွေးရမယ်နော။် မဇနိရယ် အခုလောလောဆယ် ပါဆယ် နဲ.ပိုလိုက်ပါ.။ စားချင်လို.ပါ။ အိမ်ချင်းနျိးချင်လိုက် တာနော။်
Republic September 12, 2008 at 6:15 PM
မမနိ ..ရပီ ..သေချာပါတယ်ဗျ ၊ ဒီလောက် ဟင်းစုံရင် ဆိုင်ဖွင့်လို့ရပါပီ ၊၊
ပုံထဲကဟင်းတွေကြည့်ပီး ဗိုက်တောင်ဆာလာပီဂျာ ၊၊
khin oo may September 12, 2008 at 6:29 PM
ဟုတ်တယ်။ မြန်မာ ဆိုင် အချှိူုတောင် မဇနိလောက် မကောင်းဘူး။
My Wonderful Moral Thoughts September 12, 2008 at 6:31 PM
စားခြင်တယ်ဗျို့။ ဟင့် ဟင့်
nu-san September 12, 2008 at 7:13 PM
မဇနိရေ.. အမလည်း တိုဖူးသုပ်စားချင်နေတာ.. ဒါပေမယ့် ကျိုတာက အရမ်းမွှေရတယ်ဆို ဟုတ်လားဟင်.. အကြာကြီးမွှေပေးနေရတာလား.. မစားရတာကြာတော့ စားချင်တယ်.. အခုလို ပုံမြင်ရတေ့ာ ပိုတောင် ဗိုက်ဆာလာပြီး စားချင်လာတယ်... ဟင်း.. (သက်ပြင်းချသံ.. :D)
Sai Tun September 12, 2008 at 7:44 PM
သက်ဝေ September 12, 2008 at 7:48 PM
khin oo may September 12, 2008 at 10:17 PM
အောင်မယ် ။ ပုဇွန်ချဉ်တောင်လုပ်တတ်သေးတယ်။ မယုံရင်လုပ်ခိုင်းကြည်.။
တို.ဟုးသည် ပဲမှုန့်  အစိမ်းမှ ဖြစ်လာ သည် ဆိုသည် ကို ကြားရသော သကလ အန်မတန်မှ အံသြမိသည်။ ဘဝတွင် ပထမဆူံး ကြားဘူးခြင်းပေတည်း။ ညာမပြောပါ.။ to be honest
မြရွက်ဝေ September 13, 2008 at 5:20 AM
အင်းမ်... မနိလက်ရာတွေမြင်ပြီး စားချင်တယ် စားချင်တယ် လုပ်နေလို့ ခေါင်းဆင်နင်းနေပြီဗျို့။ မKOM လို လိုက်ပြောလိုက်ဦးမယ် "တို.ဟုးသည် ပဲမှုန့်  အစိမ်းမှ ဖြစ်လာ သည် ဆိုသည် ကို ကြားရသော သကလ အန်မတန်မှ အံသြမိသည်။ ဘဝတွင် ပထမဆူံး ကြားဘူးခြင်းပေတည်း။ ညာမပြောပါ.။" :D
ဟူး...မဇနိလုပ်ပုံနဲ့ တော့နော် ဘီလိုလုပ်ရပါ့ ပါစပ်ကြီးက သွားရည်ကျကျနေလွန်းလို့အမဲသားကြော်အရမ်းကြိုက်တာ စားလို့ ကောင်းမှကောင်း ၊တို့ဟူးသုတ်လည်းကြိုက်တယ် အညာဘက်မှာအစားများကြတယ်နော် ။ ဟင်းကလည်း ကောင်း ပြင်ထားတာလေးတွေကလည်း စားချင်စရာ ဒါလည်း အနုပညာတစ်မျိုးပဲ အစ်မနုစံဆိုလည်း ဟင်ပွဲပြင်ထားတာလေးတွေ လှမှလှ အရသာမသိသေးဘူးစားချင်နေပြီး....အင်းးးးး ကိုယ့်အစ်မတွေလိုမျိုး ရှာမှ ရှာမှ တွေ့ မှတွေ့ ပါ့မလားးး :)
little moon September 13, 2008 at 7:37 AM
ဟောဗျ ... ဒီလောက်ကောင်းတာတွေကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေး လုပ်စားမှတော့ ဘယ်အဖျားကခံနိုင်မှာလဲ ပျောက်ရောပေါ့။
ဝေလေး September 13, 2008 at 7:53 AM
အယ် .. စားချင်တယ် စားချင်တယ်
တို့ဟူးသုတ်လဲစားချင်တယ် အမဲသားကြော်လည်းစားချင်တယ် ကြက်သားကြော်လည်းစားချင်တယ် .. အင်း ထူးပါဘူး အကုန်စားချင်တယ် အဟီးး....
ပုံတွေကြည့်ပြီး သွားရည်ယိုသွားတယ် အဟင့် .. စားချင်လိုက်တာ.. ကိုယ့်ဘာသာလုပ်စားတတ်ဘူး.. အမှန်ပြောတာ ညာဘူး :P
မဇနိ September 13, 2008 at 10:29 AM
မမကေအိုအမ် အိမ်ချင်းမနီးချင်ဘူး။ မမက ဘလော့ဂ်ကို တက်သုတ်ရိုက်လည်နေလို့ လုံချည်လိုက်ကောက်ပေးနေရမှာ ကြောက်လို့ ကွိ ကွိ
ကိုကြီး ၀ီ နော် ၀ယ်မစားရင် တွေ့မယ်
အမနုစံရေ တို့ဟူးကျိုတာ မကြာဘူး လွယ်လွယ်လေးဗျ
၅ မိနစ်လောက်ပဲကြာတာ။ မကျိုခင်သာ သေချာမွှေထားပေး။ လေနဲ့အလုံးလေးတွေပါ ကျေအောင်မွှေထားရင် မီးဖိုပေါ်က ခဏပဲရတယ်။ လုပ်စားကြည့်နော်
ရှမ်းခေါက်ဆွဲလေးလည်း စားချင်တယ် Sai Tun
ကျေးဇူးပါ မမသက်ဝေ ကိုဇနိလည်း စားချင်နေရှာတယ်
မမကေအိုအမ် တို့ဟူးသည် ပဲမှုန့်မှရပါတယ် နော်။
မောင်မျိုးရေ မဇနိကို အားကိုးမလား။ ညီမလေးလိုက်ရှာလိုက်မယ်။
ကျန်နေသေးတဲ့အဖျားက အကို့ဆီရောက်မှ ဆိုဖာနဲ့တွေ့ပြီး ပိုလန့်ပျောက်သွားတာဗျ
ညီမ ဝေလေး စားချင်ရင် ချက်ကျွေးမယ် ဒီမှာ စားမယ့်သူမရှိလို့ တယောက်တည်းပျင်းနေတာ
မဇနိ September 13, 2008 at 10:30 AM
ညီမမြရွက်ဝေ မဇနိကို မေတ္တာပို့နေပီလားမသိ ။
ခေါင်းဆင်နင်းနေလို့တဲ့။ ချက်ပြီး သွားပို့လိုက်ရမလား ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့
သက်တန့် September 13, 2008 at 11:37 AM
ကြက်သားကြော်ရော၊ အမဲသားကြော်ရော၊ ပုဇွန်ခြောက်ဆန်ပြုတ်ရော... ရှယ်တွေပဲ...
သရေတွေကျလို့ ဒီဘလော့ဂ်တောင် မျောသွားနိုင်တယ်... :P
ဖိုးသောကြာ September 13, 2008 at 2:18 PM
ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မမကြီး မဇနိ မြန်မြန်နေကောင်းပါစေဗျာ။ ချက်ထားသမျှလည်း အွန်လိုင်းက အားပေးသွားပါတယ်။
မောင်ဖြူ September 13, 2008 at 11:32 PM
မာမီရယ် ဝယ်ကျွေးကွယ်၊ တိုဟူးသုပ်စားချင်တယ်~~~
မဇနိ September 14, 2008 at 10:28 AM
ဒီဘလော့ဂ်တော့ မမျောပါစေနဲ့အုံးနော် ညီမသက်တန့်
ကိုဖိုးသောကြာ ပို့သတဲ့မေတ္တာကြောင့် နေပြန်ကောင်းချင်လှပီဗျာ
အိမ်ပြန်ရတော့မယ် ငိုနဲ့ ကိုမောင်ဖြူ
ဆောင်း September 14, 2008 at 1:57 PM
မနိရေ.. ကျမ တို့ ဖူးကျိုတာ ဆင်ခေါင်းပဲအစိမ်းဘဲ ၀ယ်လို့ ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ ရေထဲ့ကြိုတာ ပဲအနံ့ နံ လို့ အတော်ကြာအောင် အနံ့ ပျောက်အောင် ကြိုရတာ။ မနိက ၅မိနစ်ထဲကြိုတာ ဆိုတော့ပဲမှုန့် အကျက်နဲ့ များ ကြိုတာလားဟင်
တန်ခူး September 15, 2008 at 1:12 PM
ညီမရေ… ပိတ်ရက်က အလုပ်ရှုပ်နေလို့မလည်အားတာ ခုတော့ တို့ ဘူးသုတ်လေးက ကြိုလို့ … အစာအိမ်ပြန်ဖြစ်လို့ဆေးသောက်နေရတာ တို့ ဘူးသုတ်နဲ့ဘယ်လောက်ဝေးနေဦးမလဲ မသိဘူးလေ… တို့ တို့ ဘူးကြိုရင် ဂျင်း၊ကြက်သွန်ဖြူ အရည်မညှစ်ပဲ ကြိုတာ ခုတော့ မဇနိဆီက နည်းလေးသိသွားပြီ… အမဲကြော်လေး စားချင်သွားတယ် ရုံးကပြန် အမဲသားဝင်ဝယ်ဦးမှ…
မဇနိ September 16, 2008 at 7:44 PM
ညီမဆောင်းရေ တို့ဟူးကျိုတာ အဆင်ပြေပြီလား
အမတန်ထူး အစာအိမ်ပြန်ဖြစ်နေရင် မတည့်တာတွေ မစားချင်နဲ့နော်
နောင်ခါမှ အညာကို အလည်လာခဲ့ပါ ချက်ကျွေးပါ့မယ်